वाम गठबन्धनमा नेता मिलाउन सकस, कसको चाहना के ? – Online National Network
वाम गठबन्धनमा नेता मिलाउन सकस, कसको चाहना के ?
१७ पुष २०७४, सोमबार ०३:२६
काठमाडौं, १७ पुस – पार्टी एकताका लागि संयोजन समिति बनाए पनि एमाले-माओवादी केन्द्रले आफ्ना शीर्षस्थ नेताहरूको व्यवस्थापन गर्नेगरी नयाँ सांगठनिक प्रारूप अझै तयार गर्न सकेका छैनन् । दुवै अध्यक्ष तहमा पार्टी एकतापछि नेताहरूको व्यवस्थापनका विषयमा सघन छलफल चलिरहेको थाहा भएको छ । एकतापछिको आफ्नो भूमिकाका विषयमा नेताका आआफ्नै इच्छा अभिव्यक्त हुन थालेका छन् ।
दुवै पार्टीका अध्यक्ष कार्यकारी भूमिकामा रहने बताइए पनि अहिलेसम्म त्यस्तो मोडालिटीको ठोस खाका तयार भने भइसकेको छैन । समान कार्यकारी भूमिकामा रहने ‘भद्र सहमति’ सहित पार्टी एकताको घोषणा गरिएको छ तर त्यस्तो भूमिकाको व्यवस्थापन मिलाउन नेताबीच गृहकार्य जारी छ । बुधबार र शुक्रबार ओली–दाहालबीचको एक्लाएक्लै छलफल त्यसैमा केन्द्रित देखिन्छ । सम्मानजनक एकताका लागि नेतृत्वको पदीय व्यवस्थापनको प्रश्नलाई दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले दबाब रूपमा उठाएका कारण पनि गठबन्धनका दुवै अध्यक्ष थप दबाबमा छन् ।
दोस्रो तहका नेतासम्मको ‘पोजिसन’ एकतापूर्व नै किटान खोज्दा एकता भाँडिनसक्नेतर्फ ओली(दाहाल दुवै सचेत देखिएका छन् । त्यसो हुँदा केही शीर्ष नेताको पदीय व्यवस्थापनको मोटो खाका मिलाएर अन्यलाई भने एकतापछिको सिस्टममा पाइपलाइनमा राखेर व्यवस्थापन गर्दै जाने योजनामा दाहाल-ओली छन् ।
तर, पार्टी एकतापछि अध्यक्ष पद माओवादीलाई छाड्नुपरेमा भने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखमा एमालेले आफ्नो दाबी गर्न खोजेको छ । माओवादी अध्यक्ष दाहाल कार्यकारी भूमिकामै रहन चाहने भएकाले उनलाई सहअध्यक्षमा राख्न र मनाउन नसकिने एमालेले बुझेको छ । ओली(दाहालको पदीय व्यवस्थापनसँगै पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल र नेपालको पदीय व्यवस्थापनमा पनि गठबन्धनलाई चुनौती छ । खनालले मिडियामार्फत राष्ट्रपति बन्ने चाहना राख्न थालेका छन् ।
राष्ट्रपति भण्डारी स्वयंले पनि आफू छोटो समय मात्रै राष्ट्रपति भएकाले पुनः दोहोर्‍याइदिन गठबन्धनका नेतासँग लबिङ थालेकी छन् । भण्डारी नै राष्ट्रपति दोहोरिए माओवादीलाई पनि उपराष्ट्रपति दोहोर्‍याउन दबाब पर्नेछ । त्यसो हुँदा उपराष्ट्रपतिमा नन्दबहादुर पुन दोहोरिनेछन् । ‘भण्डारीलाई नै राष्ट्रपति दोहोर्‍याउन परेमा हामीबाट फेरि पासाङजी नै उपराष्ट्रपतिमा दोहोरिनुहुन्छ,’ माओवादी नेता चक्रपाणि खनालले भने ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको चाहना भने अहिले नै राष्ट्रपति बन्नेतिर नरहेको उनीनिकट स्रोत बताउँछ । उनले अझै पनि राजनीतिमै क्रियाशील हुन चाहेका छन् । उता, संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको संयोजन गरेको हुनाले अब राष्ट्रपतिमा एमाले नेता सुवास नेम्बाङलाई लैजानुपर्ने एमाले दोस्रो तहका नेताहरूले व्यक्त गरेका छन् । तीन पटक सभामुखको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका नेम्बाङ आफैंले मुख खोलिनसके पनि ‘पार्टी नेतृत्वले मूल्यांकन गर्नुपर्ने’ परोक्ष टिप्पणी गर्ने गरेको स्रोतले बतायो ।
एमाले पक्षले संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा नेम्बाङलाई दिँदा राष्ट्रियसभा र प्रादेशिक संसद् सञ्चालनमा सहजता आउने भन्दै नेतृत्वलाई आग्रह गरिरहेको जानकारी दियो । माओवादीले भने राष्ट्रपति र सभामुखको विषय बाँडफाँट गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ‘राष्ट्रपति उहाँहरूले लिन चाहेमा सभामुखमा हाम्रो अडान हुन्छ,’ माओवादी नेता पौडेलले भने । माओवादी स्रोतका अनुसार माओवादीको भागमा परेमा पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती वा कृष्णबहादुर महरा मध्येबाट आउन सक्नेछन् ।
एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको व्यवस्थापन पनि गठबन्धनभित्र पेचिलो छ । एकता घोषणा पूर्व नै यी दुई नेताको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता एमाले(माओवादी दुवैलाई परेको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन जितेर आएका भए कुनै न कुनै रूपमा गौतम( श्रेष्ठको व्यवस्थापन सहज हुने थियो । तर, निर्वाचनमा दुवै नेता पराजित भएपछि उनीहरूको व्यवस्थापन ओली(दाहाललाई चुनौती बनेर आएको छ ।
एकताअघि नै दुवै नेताको व्यवस्थापनका विषयमा छलफल चलेको स्रोत बताउँछ । तर, यी दुई नेताको व्यवस्थापनमा फरक-फरक मोडालिटीमा छलफल चलेको छ । स्रोतका अनुसार जनताले मतबाट पराजित गरिसकेपछि आगामी ५ वर्ष पार्टी कामको जिम्मेवारी लिएर सरकार, सदनलगायत जिम्मेवारीबाहिर गौतम-श्रेष्ठ दुवै नेता बस्नुपर्ने एकथरी धारणा दुवै पार्टीभित्र उठेको छ । त्यस्तै, अर्को धारणा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपतिमा समेटिने या उक्त पदमा चुनाव लड्न जाने गठबन्धनभित्रका नेताको स्थानमा पदपूर्ति गर्ने गरी उपचुनावमा निर्वाचन लडाउने भन्नेमा गठबन्धनभित्रै चर्चा चलेको छ।
आफ्नै नयाँ निवास खुमलटारमा भेट गर्न आइपुगेका भट्टराईलाई दाहालले मूलधारमै आउन आग्रह गरेका थिए । ‘बाबुरामजी पनि कांग्रेसतिर जानुहुन्न, उहाँको एउटै कुरा कम्युनिस्ट भन्ने शब्द नराखी समाजवादी पार्टी राखिदिए हुन्थ्यो भन्ने देखिन्छ,’ माओवादी नेता पौडेलले भने, ‘उहाँहरूलाई यतै ल्याउने पहल जारी छ ।’ — अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक